तपाईलाई सुक्खा बरफको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा नेटवर्क मौसम विज्ञान
पक्कै पनि तपाईंले सुक्खा बरफको बारेमा सुन्नुभएको छ। यो ठोस अवस्थामा कार्बन डाइअक्साइड हो, वायुमण्डलीय दबावमा स्थिर -78,5.° डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा अझ विशेष बनाउने विशेषता यो हो कि जब यो "पग्लन्छ" यो कुनै प्रकारको चिसो नलगाई सिधा गैसियस स्थितिमा जान्छ। यसैले यसलाई सुक्खा बरफ भनेर चिनिन्छ।
के तपाइँ यसको गुणहरू र यसको बिभिन्न प्रयोगहरू जान्न चाहनुहुन्छ?
1 विशेषताहरु र गुणहरु
2 पानी माथि सुख्खा बरफको फाइदाहरू
3 अनौंठो प्रभाव
4 यो केको लागि हो?
5 घरमा सुक्खा बरफ कसरी बनाउने
विशेषताहरु र गुणहरु
सुख्खा बरफ अन्य औद्योगिक प्रक्रियाहरूको उप-उत्पादको रूपमा उत्पन्न ग्यासबाट प्राप्त हुन्छ। सुख्खा बरफ दहन बोटबिरुवा र किण्वन प्रतिक्रियाहरूमा उत्पादन गरिन्छ। अघि उल्लेख गरिए अनुसार यो स्थिर कार्बन डाइअक्साइडको बारेमा हो। धेरै कम तापक्रममा यो ग्यास ठोस अवस्थामा रहन सक्षम छ। जब यो sublimated यो तरल को कुनै पनि प्रकार, पानी वा आर्द्रता पैदा गर्दैन।
जब यो ग्यास CO2 भरिएको वातावरणमा sublimated हुन्छ, यसले वातावरणमा आर्द्रताको मात्रा घटाउँछ। यसले ग्यासलाई प्रयोग गर्न धेरै उपयोगी बनाउँदछ जुन नमीसँग संवेदनशील उत्पादनहरूको संरक्षण गर्ने प्रयास गर्दा।
प्रत्येक किलोग्राम सुख्खा बरफले १136 फ्रिग्रीहरू उर्जा उत्पादन गर्दछ। ग्यास--.78,5..16 डिग्री सेल्सियस को तापक्रम मा छ र लगभग १ extra अतिरिक्त फ्रिग्रीहरू उत्पादन गर्दछ, जसले यसलाई प्राप्त गर्न सम्भव बनाउँदछ। प्रत्येक किलोग्राम सुक्खा बरफको लागि कुल १152२ फ्रिग्रीहरू।
पानी माथि सुख्खा बरफको फाइदाहरू
बराबर तौलमा, सुक्खा बरफ परम्परागत बरफ भन्दा १ %०% बढी चिसो गर्न सक्षम छ। यो भान्साकोठा क्षेत्रमा धेरै चाखलाग्दो छ, किनकि यो उत्पादन चाँडो चिसो गर्न सक्षम छ। सुख्खा बरफको घनत्व १. 170 केजी / डीएम than भन्दा ठूलो छ र पानी बरफको घनत्व ०.1,5 K केजी / डीएम to बराबर छ, बरफको बराबर मात्रामा प्रयोग गरिएको, सुक्खा बरफसँग शीतलन क्षमता २ traditional०% पारम्परिक बरफको तुलनामा छ। यसले ती ठाउँहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ जहाँ बरफले ओगटेको मात्रा मौलिक छ, सुख्खा बरफ यस ठाउँको फाइदा लिन उत्तम विकल्प हो।
सुख्खा बरफ मा केवल माथि उल्लेख गरिएको जस्तै विशेष गुणहरु छैन, तर यसलाई एक जीवाणुनाशक एजन्ट र फg्गीस्टेटिक एजेन्ट पनि मानिन्छ। जब उच्च बनाइटी हुन्छ, एक वातावरण उत्पन्न हुन्छ जसको CO2 एकाग्रता यति उच्च छ कि एक antimicrobial कार्य exerted छ। तसर्थ, यो एक उत्कृष्ट ग्यास छ ब्याक्टेरिया, साचा र खमीर को विकास धीमा गर्न र एक पूर्ण स्वच्छता वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्।
यो ग्यास वातावरणमा, कन्टेनर भित्र र कन्टेनरमा रहेको अक्सिजन विस्थापन गर्न सक्षम छ, जसले स्थानहरूको जैविक गुणस्तर सुधार गर्न योगदान पुर्‍याउँछ जहाँ केही उत्पादनहरू भण्डारण गर्न र सुरक्षित गर्नु आवश्यक छ।
यो केको लागि हो?
सुख्खा बरफ आज विभिन्न उपचार र कार्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको प्रयोगहरू मध्ये हामी पाउँछौं:
चिकित्सा र वैज्ञानिक अनुसन्धान: बिरुवा रोप्न वा अध्ययनको लागि अserve्गहरू जोगाउन, यसलाई सुक्खा बरफ प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ किनभने यसको ठूलो रेफ्रिजरेसन क्षमताले यसलाई राम्रो अवस्थामा राख्छ। यो वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जैविक उत्पादनहरू कम तापक्रम, शीत एक्सोडोरमिक प्रतिक्रियाहरू र अल्ट्रा-फ्रिज फ्रिज कोशिका, टिश्यु, ब्याक्टेरिया र भाइरस राख्न प्रयोग गरिन्छ।
पुनर्स्थापनामा: हाउटेट खानामा, सुक्खा बरफ उच्च गुणवत्ता र मूल्यको पूर्ण रूपमा विदेशी व्यंजनहरू सिर्जना गर्न सम्भावनाको दुनिया खोल्न प्रयोग गरिन्छ। यस बरफको गुणहरु को लागी धन्यवाद, धेरै रोचक र आकर्षक परिणाम ग्राहक को लागी प्राप्त गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा परिष्कृत शेफहरू मौलिक प्रस्तुतिहरूबाट सुगन्धित धुवाँ, चिसो इफ्युसन, बनावट र मौस र फोई ग्रास, स्लुजीज, आइसक्रीम, फोम र क्रिमहरूमा विरोधाभास, वा मिक्स र विस्तृत रूपमा तयार गरिएको ककटेलहरूमा धुवाँको साथ प्रभावशाली प्रभाव सिर्जना गर्न सक्दछ।
उद्योग: उद्योगमा यो तत्व संयोजन गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ र चिसो संकुचन द्वारा टुक्रा को समायोजन। यो क्रायोजेनिक ग्राइन्डिंग र प्लास्टिक र रबर्सको डिब्रिंगको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ।
कृषि खाना: यस क्षेत्र मा यसलाई मासुको मिश्रण र मिक्सनको बेला घुँडादारमा आटा चिसो गर्न प्रयोग गरिन्छ, खानाको गहिराई जमिन र तापमान नियमन। यातायातमा सुख्खा बरफको प्रयोगले चिसो चेनको मर्मत सुनिश्चित गर्दछ।
ठुलो मात्रा वितरण: यो प्रयोग गरिन्छ जब एक तत्काल मर्मत आवश्यक पर्दछ यदि केहि रेफ्रिजरेसन उपकरण बिच्छेदन गरिएको छ र चिसो चेन कायम राख्नको लागि।
क्राइोजेनिक सफाई: सुक्खा बरफको कणलाई पानीले केही प्रकारको परिवर्तन भोगेका ती सतहहरू सफा गर्नको लागि उच्च दबावमा इन्जेक्सन गर्न सकिन्छ, जस्तै केही विद्युतीय स्थापनाहरूमा।
कृषि: यो कृन्तक, मोल र कीराहरू जस्ता कीराहरूको नियन्त्रणको लागि राम्रो परिणामको साथ प्रयोग गरिन्छ।
कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक्स: यो एक धेरै राम्रो विकल्प छ इलेक्ट्रनिक उपकरणहरू कूल गर्न र उनीहरूको प्रदर्शन सुधार गर्न, विद्युत सिग्नलको प्रसारणको गतिलाई।
निर्माण: यो फ्रिजिंग फ्लोरहरू र पाइपहरूको मर्मत सम्भारभन्दा पहिले प्लग सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ।
घरमा सुक्खा बरफ कसरी बनाउने
यदि तपाईं घरमा सुक्खा बरफको विशेष प्रभावहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग निम्न सामग्रीहरू हुनुपर्दछ:
CO2 - कार्बन डाइअक्साइड (हामी त्यसलाई आगो निभाउनेहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौं)
एउटा झोला वा कपडा
साइकल पाels्ग्राहरूलाई फुलाउनको लागि एक एडाप्टर
तपाईंले कपडाको झोला राख्नुपर्छ (यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो प्वाल पार्नुहोस् ताकि यसले थोरै ग्यासलाई उम्कन दिनेछ) आगो निभाउने उपकरण वा हामीले प्रयोग गरिरहेको CO2 बोतलको नोजल वरिपरि। एक पटक हामीले कपडा झोला राख्यौं, हामी ग्यासलाई रिलीज गरौं जसले गर्दा यो झोलामा प्रवेश गर्दछ। जब ग्यास छोडिन्छ, यसको भित्रको दबाबले स्वत: फ्रिज हुनेछ र हामी सुख्खा बरफ पाउनेछौं। यो सुख्खा बरफ हाम्रो डेसर्ट र पेय पदार्थलाई केही प्रभावशाली प्रभाव दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब यो पानीको सम्पर्कमा आउँदछ यो खनिज हुन्छ र त्यसले प्रभावशाली सेतो बाफलाई जन्म दिन्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, सुख्खा बरफ धेरै क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रभावले हामीलाई चकित पार्न कहिल्यै रोक्दैन। अब जब तपाइँ यसको गुणहरू जान्नुहुन्छ, घर मा यसलाई प्रयोग गर्न हिम्मत गर्नुहोस् र तपाइँका साथीहरूलाई चकित पार्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » सुख्खा बरफ
जर्ज रिवेरा भन्यो
घरमा सुक्खा बरफको तयारीमा, उनीहरू साइकल पा inf्ग्राहरूलाई फुलाउन एउटा एडाप्टरको उल्लेख गर्छन्। यो कहिले सुख्खा बरफको तयारीको लागि प्रयोग गरिन्छ?
जर्ज रिवेरालाई जवाफ दिनुहोस्
हिउँको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा
सूजन, एक तरंगको भाग र विशाल छालहरू